FSX kune avo vanofanira kutanga
zano FSX kune avo vanofanira kutanga
11 mwedzi 6 mazuva apfuura #975 by DRCW
FSX inzira yekudzidza uye kwete kungova mutevedzeri chaiyo. Chero ani zvake aive ari pedyo nebhokisi achakuudza
kushungurudzika kunogona kuvapo kana iwe ukakanganisa uye unofanira kudzorerazve FSX uye wotanga kupfuura. Zvechokwadi izvozvo hazvina kufara
kwandiri (LOL) Izvi zvinotevera chirevo chezvandakadzidza mumakore uye ndinovimba zvichakubatsira pakuita kokutanga kana
kudzorerazve FSX Deluxe kana Gold Edition.
CHIKAMU 1: HARDWARE NEVANHU
Usati waisa FSX chinhu chikuru chekubudirira ndechekuti uve nechokwadi chokuti une nzvimbo yakanaka uye yakasimba. Iwe unogona kufunga
Kuvandudza PC yako ne addng RAM / yakaparadzanisa hard drive etc ... Chero mimwe yemufananidzo kana gamer inogona kukuudza system inowedzera
inoita mutsauko wose. FSX inotenderera zvakasimba neine simba remushandisi quad core kana zviri nani pa 4 ghz kana kupfuura.
Vanhu vazhinji vanopfekenura purogiramu yavo Muenzaniso 3.2 ghz ku4ghz .. kana 4ghz ku4.5ghz. Saka nei vachiita izvi? Nokuti
FSX inonyanya, inonyanya kushandiswa uye inogara iine vanhu vachisimudzira masangano avo kusvika kumucheto. Vanofarira
kuzvirumbidza pamusoro peFNPX fps paIndaneti. Izvi zvinoreva iwe iwewo here? HERE ... Nechinangwa chipi nechipi chaunoita kumutambo wako
pamusoro pefekitari specs pane njodzi dzinogona kupisa hardware yako kunze kwekuti iwe uzive zvauri kuita,
shandisa izvo zvaunazvo uye zvaunogona kuwana.
Kuita kuti mishoni yako ibude FSX kuitira kuti iwe uwane hutori hwakanaka hwemifananidzo mbiri uye kushanda chinangwa
tora mafirimu aunoda uye faira ye30 fps. Chinonyanya kukosha kubwinya pasina stutter ndege. Ndine 8 core AMD
processor iri ku3.5ghz uye ini ndakaipfeketa asi chete ku3.7ghz pamwe nekuwedzera imwe fan inotonhorera mukati meshongwe yangu
iyo yakagadzirirwa kugadzirisa uye kutumira mhepo. Kana iwe wakatenga kombiyuta kubva kumutengesi wemunharaunda yako, iwe ungafananidza
kushandura shongwe uye mahombekiti mazhinji ezvitoro haasi kuwedzera. Kwose kombiyuta inoshandisa masvingo emagetsi ekugadzira iwe plug
kupinda mumadziro inogona kunge isingasviki.
zvakakosha. Kana iwe uine hanya nezve simming uye unoda kuwedzera yakawanda yechitatu software (Scenery, ndege, makore
etc ..) unoda zvishoma kana 1TB. Ndinokurudzira dambudziko re 2TB. Iniwo ndinokurudzira kushandisa dhirairi rakaparadzana kubva
iyo dhirairi yakaoma iwe une mahwindo akaiswa pairi.
Iwe unoda kushandisa zvakanaka maitiro RAM (DDR3 nezvimwe.) Zvishoma zvinoda 4 gig RAM asi iwe chaizvoizvo
anofanira kufungidzira 8 gig yeFSX nehurongwa hunogona kuwedzera kusvika ku 32 gig RAM mumugwagwa.
Pano ndipo paunogona kushandisa mari yakawanda $$$. Kune mvura yakanatswa makadhi ayo anotenderera $ 1500 US. WOW handigoni
izvo! Iwe unoda kadhi kadi yakanaka iyo inogona kutenderera $ 150 US. Ndiri kushandisa 2 AMD Radeon R9 200 Series
Graphic Cards running in Firewire. Rimwe kadhi rakanaka rakagadzirirwa rinobatsira kutora mutoro kubva purogiramu yako. Pane
makadhi akawanda kunze uko saka mazano angu akakurumbira ndeokutsvakurudza uye kuwana bhadha yakanakisisa yebha yako. Kutsvaga FSX maforamu kuchakubatsira
pakuita chisarudzo chakanaka nguva yekutanga.
Pakave nedzimwe nyaya apo kuvandudzwa kwevatyairi veCall Card kwakonzera kukanganisa kwakaipa muFSX. Usati watenga mifananidzo
kadhi ona kana iwe unogona kuwana chero nyaya dzinozivikanwa nemakadhi makudhiki kana zvimwe zvipikiso muFSX. Kana iwe hausi
kuva nematambudziko nemari yako yekare yemakadhi uye iwe unofanirwa kushandura mutyairi uye zvino kamwe-kamwe kune matambudziko,
dzokera kumashure wekupedzisira mutyairi wawakamisa.
Overkill, Overkill, Overkill !!! Iwe unoda simba rekushandisa iro rakapedzeredzwa kune hardware yako. Izvi zvichakubvumira kuti uwedzere kana
shandura hardware pasina kuwedzera simba rako. Ndine simba re1000 reWt rinopfuura kaviri chii
zvaidiwa kuti ndigone PC yangu.
Kutsvakurudza nekugadzirira nguva isati yasvika chinhu chikuru musati washandisa FSX.
Chikamu 2: Kuisa nekuwedzera FSX
Iye zvino zvatakafukidzira nheyo dzepakutanga, regai tiise FSX. Cherechedza kuti iyi yekufambisa yakagadzirirwa
FSX Deluxe neGold editions kwete FSX steam iyo inoshandisa fomu yakasiyana.
Saka chii chiri kusiyana pakati peDeluxe neGold?
Bhaibheri re Deluxe harina kuuya nekukurumidza X uye ndizvo zvazviri. Kana iwe une yeDeuxe version, iwe uchadaro
inoda kuisa SP1 uye SP2. NeGold edition iwe unongowedzera kuwedzisa disc mushure mokuisa disc 1 uye 2
Step 1: Usati waisa diski 1 & 2 ita faira mumagwaro ako nekusarudza faira itsva / kurudyi
Zita iyo faira "FSX" uye uikudze kudesktop yako. Paunenge waisa muFSX disc 1 sarudza zvimwe zvingasarudzwa uye zvino funga
iyo FSX folda pane desktop yawakasika. Izvi zvichadzidzisa FSX kuisa purogiramu mune iyo faira pane
Purogiramu dzepurogiramu (x86)
Kamwe kamwe disc disc 1 & 2 yakaiswa FSX inotanga pakarepo. Iwe uchazobva watumirwa kuti uise mukati memutsetse wako wechikoni
uye shandisa purogiramu yacho. Mushure mekugadzirisa usaisa kuwedzera (Gold) kana kuisa SP1 kanaSP2 (Deluxe)! Kutanga kumhanya
FSX muhurukuro yekuenda kwemhepo kwemashure mashomanana ipapo rega purogiramu.
Step 2: Zvino isa kuwedzera (Gold) SP1 & SP2 (Deluxe). Nokuti yeGold edition inotanga FSX uye zvakare iwe unoda
Ita kuti iwe uise mukati mako chigadzirwa chako chekukurumidza kuitira kuti uite. Iwe uchazobvumirwa kutendera FSX
kuti uwedzere hutsva hutsva hwekuwedzera kwepakiti. Sarudza Hungu. Kamwezve tanga FSX uye shandisai ndege yepachena yega
mashomanana mashomanana uye obuda purogiramu yacho.
Step 3: ( rambai danho iri kana iwe chete uine 1 motokari) Kana uine motokari yakasiyana iwe unoda kuzvipira
nokuti FSX ikozvino ichava nguva yekukopa & kuiisa kune iyo motokari.
Ngatiti mahwindo akaiswa pamotokari C: uye iwe unenge usina girazi D: zvakare yakaiswa muPC yako. Sarudza
Kutanga / Computer / Drive D:
Nyora uye unamate fSX faira pane desktop yako kuDhiragisi D: Iyi inotora inotora 5 kusvika maminitsi 10.
Kana ikakopiwa iwe zvino unoda nzira shoma itsva kuitira kuti ugone kumhanya FSX kubva pakombiyuta yako. Chokutanga dhonzai nzira shoma yemazuva ano
pane desktop yako kuenda ku Recycle Bin. Enda kuDhidhi D uye uzarure faira yeFSX. Dhura pasi kusvika kuFSX.EXE file file,
kurudyi penya pairi uye sarudza "tanga nzira shoma"ipapo uzvikweze kudeskodha yako. Izvi zvino zvichakubvumira kuti utange FSX uchishandisa izvozvo
shortcut. ONce zvakare runomhanya FSX muhurukuro yekuenda ndege inoita kuti chirongwa chigare chakasimba. Iye zvino unogona kubvisa fSX faira
pane desktop yako. Iwe unomhanya FSX pamotokari D: kubva pano kusvika mberi.
Step 4: Windows Vista, 7 uye 8 kuisa yako UIAUTOMATIONCORE.DLL kuFSX.
Iyo uiautomationcore.dll faira inofanirwa kudzivirira vamwe kuparadzirwa kwedeskodhi inozivikanwa muFSX. Chinhu chinonyanya kukosha
iwe unofanirwa kuisa rakarurama dll nokuda kwehuwandu hwemawindo. Kuisa chakaipa kunogona kukonzera mamwe matambudziko. Enda ku
yako yekutsvaga injini uye funga uiautomaioncore.dll yeVista / yeWindows 7 / yeWindows 8 / yeWindows 8.1 yakambo
OS iwe. Kana uchinge wawana shanduro yakarurama, uibudise kudesktop yako wozoiisa muFSX yako huru faira kwete
pane zvimwe !!! Chengeta kopi yacho mumapepa ako mafaira sekudzoka shure.
Step 5: Rongedza Zvirongwa zvako muFSX.
Mhanya FSX uye shandura kubva kune ndege isina kuenda kune zvigadziri. Pano ndipo pane iwe unogona kuchinja maikirwo, makore, mota nezvimwe ... Ndinokwanisa kuverenga
kunze nhanho nhanho asi pane kune mamwe mavhidhiyo makuru ekuraira pa youtube. Muvhidhiyo iyi inokurudzirwa kushandiswa kunze
frame rate limiter asi ndakawana zvinetso ne stutters uye kumbomira mukutiza saka ndinokurudzira kuisa FSX frame frame yako
muchengeti we 30 fps kana hafu yekubvongodza kwevhidhiyo chekuona. Kana vataridzi vako vachivandudza kutaridzika ndeye 70 uye gadzirisa purogiramu yako
muchengeti kune 35 fps.
Step 6: Sarudza FSX
Kana uchinge wapedza zvirongwa zvako zvakapedzwa uye kuongororwa muhurumende yekushandura kwemhando yepamusoro yepamusoro fps uye kujekesa kusanganiswa kwako
hurongwa hunokwanisa kukurwira iwe unoda kuvachengeta ipapo. Isu zvino tinoda kuti tive tweak FSX.CFG faira. Ndakanyora tsvimbo pamusoro peizvi
forum muFSX General chikamu chinonzi "FSX Fixes & Tips mu cfg" Ndapota onai chikamu 1 chinosanganisira 3
kuchinja kunodiwa muFSX. Pane dzakawanda zvikamu uye mavhidhiyo kunze uko nemamwe tweaks unogona kutarisa. Rambai muchimhanya
FSX uye uedze iyo mushure mekuita izvi tweaks. Iko 3 yekutanga yandinyoresa mundima yangu inogona kushandiswa zvose panguva imwe chete asi chero ipi zvayo yewe tweak
ita mushure mezvo zvinofanira kuteverwa nekushanda FSX kuona kuti inobata sei kushanda kwako. Kana uchida, rega. Yeuka
shoko rokuti " Kana isina kuputsika ... MUSAI KUZIVA "
Shandisa fsx.cfg file kuti uite chero mararamiro akachinjwa kubva panguva ino kuenda uye kwete zvigadziriro muhurongwa hweFSX nokuti inogona
bvisa zvimwe zvekuchinja zvawakashandisa mu fsx.cfg kuti udzoke shure kuti uende.
Step 7: Kuwedzera Mawedzera-ons
Kana uchinge waedza uye uchitamba FSX pane mazai maviri erefu uye mafupi nematanho ari pamusoro apa, tanga kutanga iwe
add-on's imwe panguva imwe chete KUDZIDZIDZA KWAKE KUSA KADZIDZA DZIMWE. Nenzira iyo kana dambudziko richifanira kubuda.
Ndingadai ndichitengesa iwe waizoziva kuti ungatarisa kupi! Chinhu chimwe chandinoda kutaura ndechezvirongwa zvaunogona kutenga izvo zvinozivikanwa
sezvinosimbisa software yeFSX. Vanofanirwa kuvandudza kushanda. Zvose zvandinogona kutaura (maonero angu) Usaparadza yako
Ona iwe panhare inotevera!
Time chokusika peji: 0.104 mumasekonzi